KoNoSubs – Subttile Videos
アイドリッシュセブン『RESTART POiNTER』MV FULL [Subtitle In]
アイドリッシュセブン『DIAMOND FUSION_TRIGGER』MV FULL [Subtitles In]
Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai [1080p] [Uncensored]
【AtR手书】ロキ（そらる、まふまふ二次元形象演绎）HD [Subtitles In]
KoNo on D-Frag
Unkown on D-Frag
Evol*t on D-Frag
Translator – Izumi
Timer – KHA
Editor & Encoder – KoNo
Posted on 21st July 2018 21st July 2018 Categories MusicLeaveacomment on アイドリッシュセブン『RESTART POiNTER』MV FULL [Subtitle In]
Posted on 10th July 2018 10th July 2018 Categories MusicLeaveacomment on アイドリッシュセブン『DIAMOND FUSION_TRIGGER』MV FULL [Subtitles In]
Now, this project is justapending series. Very soon, this will be released. 😊
Posted on 6th July 2018 6th July 2018 Categories SeriesLeaveacomment on Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai [1080p] [Uncensored]
Translator – Izuna
Posted on 26th June 2018 26th June 2018 Categories MusicLeaveacomment on 【AtR手书】ロキ（そらる、まふまふ二次元形象演绎）HD [Subtitles In]
ဖူဂျို အကယ်ဒမီမှာအထက်တန်း တက်နေတဲ့ ကာဇာမာ ကန်ဂျီက ကျောင်းရဲ့ လူမိုက် ဖြစ်ချင်သူပေါ့
ဂျစ်ကန်ကန် နိုင် အတန်းအမြဲလစ် လိုချင်တာရအောင်ယူတတ်တဲ့သူ့လို လူတစ်ယောက်ဟာ ပေါတောတောတွေလုပ် အမြဲသောက်တလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ကလပ်ထဲ မဝင်ချင်ပဲဝင်လိုက်ရသောအခါ……..
ရိုက ရှီဘာဆာကီ – အမြဲပေါတောတော ကြောင်တောင်တောင်တွေလုပ် အရပ်လေးပုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းပေးမယ့်အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ darkness aura ရှိသူလေးဟာ.. သူ့ကလပ်အတွက် member အသစ်တစ်ယောက်လိုအပ်နေချိန်.. ကျောင်းရဲ့လူမိုက်တစ်ယောက်နှင့် ကံကြမ္မာဆုံမိသောအခါ………
ဒီ anime လေးဟာ Romance မပါပေမယ့် တကယ် အရမ်းကိူ sweet တဲ့ Anime လေးပါ
အဖွဲ့ဝင် လေးယောက်လုံးရဲ့ သောက်တလွဲ အလုပ်တွေ Identity တွေ အခွက်မာမှုတွေ ကို
ကျနော်တို့ main character ကြီး ကာဇာမာ ကန်ဂျီ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရသလဲဆိုတာ ကို ကြည့်ရှုရမည့်ဇာတ်လမ်းလေးပါ
Plot ပိုင်းအနေနဲ့  အရမ်းခိုင်မာတဲ့ ဇာတ်အိမ်မရှိပဲ အရေးမပါတဲ့ အခန်းတွေကို ပြသွားတယ်ဆိုပေမယ့်
တစ်ခန်းပြီး တစ်ခန်း မထင်ထားတဲ့ comedy တွေကို ပြသသွားတဲ့ အတွက် တကယ့်ကို တစ်ခန်းပြီး မနားတမ်းကျိချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ် …
Posted on 24th June 2018 3rd July 2018 Categories Series4 Comments on D-Frag
The World God Only Knows [Season 1]
Keima Katsuragi ”အောင်မြင်ခြင်း၏နတ်ဘုရား”လို့ တင့်စားထားတဲ့သူက Dating Sim Game ထဲက မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ်ကို ရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ဘဝမှာတောင် အပြင်လောကဘဝကိုပယ်ပြီး Gaming ဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Gamer Otaku တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုစလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Game စက်ထဲကို ”မိန်းကလေးတွေရဲ့အချစ်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်လား” ဆိုတဲ့စာကို လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကင်ပေါ်က ရုတ်တရက်ကျလာတဲ့ Demon မလေး Elsie က Keima ရဲ့ partner အနေနဲ့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ အဲ့ကောင်မလေးပြောပြချက်ကြောင့် အဲဒီ့ဟာက Game မဟုတ်ဘဲ တကယ့်အပြင်က မိန်းကလေးကိုဆိုလိုမှန်းသိခဲ့လိုက်ရသည်။ သူတို့ရဲ့ Mission ကိုခေါင်းရှောင်လျှင် သေမယ့် Mission ဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းရတဲ့အကြောင်းကတော့ ငရဲက Spiritsတွေ ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကပ်ပါးကောင်လိုပဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ တွယ်ကပ်နေပါတယ်။ အဲဒီ့ Spirits တွေပြန်လည်ဖမ်းဆီးဖို့ Keima ရဲ့ Game ထဲကပညာတွေရယ် ဉာဏ်ရယ်အသုံးပြုပြီး တကယ့်မိန်းကလေးတွေရဲ့အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ဘယ်လိုဖမ်းဆီးကြမလဲဆိုတာတော့
This anime series was presented by Anime mm sub team.
Facebook Page – https://www.facebook.com/animemmsubteam/
Posted on 24th June 2018 24th June 2018 Categories SeriesTags The World God Only KnowsLeaveacomment on The World God Only Knows [Season 1]